March 2011 « A.S.M.A
ရခိုင် ချင်း ချောင်း ခမီး မရမာ
သက် တိရာဝေ အေသူရို့က
တားမြစ်ပါလီ ပြောဆိုသူကို… လို့
သူ့ရွာ ကိုယ့်ရွာ မခွဲခြားဘဲ
Posted by thadawa | No comments
6:44 PM Share:
Mahachulalongkornrajavidyalaya University,Chiang Mai Campus မှ ပထမဆုံး BA တန်းပြီးဆုံးသူလဲဖြစ်၊ MMSA-၏ ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သော၊ ကျောင်းသာရေးရာနှင့်လူမှုရေး အမျိုးသား ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများ၌ နိုင်ရာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး BA(English) ဘွဲ့ပြီးဆုံးသော အသျှင်ဝရသာမိအား MMSAမှ အထူးလှိုက်လှဲအားရ၀မ်းသာစွာဂုဏ်ယူပါကြောင်းနှင့် MMSA- ပေါ် ပေါက်လာဇီရန်ထမဆုံးအားကြိုးမာန်တက်စည်းရုံးကြိုးပမ်းဦးဆောင်ခဲ့မှုများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါ ကြောင်း MMSA မှ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ထပ်မံ၍ ဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုသည်မှာ-------- ရှိဆက်လျှောက်လှမ်းရမည့် ဘ၀ခရီးလမ်းတလျှောက်တွင် ပညာပြည့်ဝ၊ နှလုံးလှ၍ သုခချမ်းသာ၊ အရာရာသော ကျောင်းခြင်းမင်္ဂလာများ ပိုင်ဆိုင်ပြည့်ဝပါဇီကြောင်း၊ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍမျာကိုလည်း ဆထက်တပိုး တိုး၍ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်သော၊ အများကောင်းကျိုး ထမ်းပိုး ရွက်ဆောင်နိုင်၍ မိမိတိုင်းပြည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊သာသာနာတိုးတက်စည်ပင် ပြန့်ပွါးအောင်ဆောင် ရွက်ကြိုးစားနိုင်သောရခိုင်သားကောင်းရတနာတစ်ပါးဖြစ်ပါဇီကြောင်းကျောင်းသားညီကိုများအားလုံးမှ ဆုတောင်းဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
6:52 PM Share:
အင်တာဗျူး(၁၀) ချက် အမေးအဖြေ ( Top 10 Interview Questions and Answers)
1. Tell me about yourself? ဖြေတဲ့ခါ ပထမဆုံးအနေနဲ့(၁) ကိုယ့်နာမည်ကိုစပြောပါ။ (၂) ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာပြောပါ (၃)ပညာရေး ပိုင်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်တ...
Academic Vision -Summer English Upgrading Class
Academic Vision -Education Project-ASMA Academic Vision Summer English Upgrading Class ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်း)မှ န...
ASMA၏ရာသက်ပန် သြ၀ါဒါစရိယဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသော အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးသည် ၁၁၊၅၊၂၀၁၁ နေ့ နေ့လည် ၂နာရီလေယဉ်ဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ပြန်ကြွတော်...
(ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုလွှာ) 27.1.2019-နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် (Asean Studies Centre) မှကြီးမှူးကျင်းပသော အာဆီယံနိုင်...